Ndakasvika muka1 room kandairoja kekuseri kwemba ndokukagarisa pamubhedha. Kakati ko hembe dzacho dziripi ndikangoti ndakadziwacha haana kuzotaura ndakangoti kakutofara kuti basa raita shoma asi nechemumoyo ndaiziva kuti rasara kupfuura ranga riripo kare. Ndakabva ndaisa african movie nokuti ndakaona sekunge igwe vaidiwa chaizvo ipapo. Ndakaona shasha yanyevenuka anyatsogarisika. Ndakazongoti ndakuenda kutoilet kuti ndikiye door nemukati. Pandakadzoka ndakaisa foni yake pacharger. Tagara paside nepaside ndakatora foni yangu ndobva ndahyda number ndikabva ndamubeepa. Akasimuka achinotarisa missed call. Paakadzoka akawana ndakamumirira ndokubva agara pakati pemakumbo angu ini ndikabva ndangoti zvangu zvaita. Pachokwadi mwana uyu ndaimutya. Akanga akanaka kundidarika. Kumba kwavo vaive nemari kundidarika. Ndakanga ndisina kana round. Agara pakati pemakumbo kudaro ndakatanga kumubata mazamu zvimwe zviye zviye zvinekakutya mukati. Ndakaona munhu haasi kumbopopota zvake ndikabva ndaziva kuti yanwa iyi.
Ndakabvisa jacket raaive akapfeka, haana kupopota futi, ndakenda kublouse aikaka akatopfava kunge munhu arikugerwa choya. Ndakatonzwa akukwidza kadzihwa pasina ndikabva ndanyemwerera zvangu. Ndakazobvisa trouser zvenharo chaizvo nokuti rakanga rakabata kuti ndii nemazigaro ake. Ndakangobatawo zvechirango but munhu akanga avakutoda kudhara. Ndakazotora tumacondom twedu twezvimbwa utwu ndokukapfeka. Kunodai ndikaona yaramba kupinda. Ndakamamikidzira kacondom ndokubva raputika. Ini ndaive ndisati ndamboboora musikana saka zvakatondinetsa kuti yayipi iyi. Ndakatora rimwe same same futi ndisati ndambodii ndichibva ndangorovera moyo padombo ndokubva ndanongedzera mupositori. Kunodai zvandikunda. Ndakazongoti chero zvazvaita ndokunongedzera ndakashandisa simba rese rakasara panzara ndokushwetedzera. Ndakanzwa hey yapinda wena. Pfungwa dzangu padzakangoti yapinda ndakabva ndatunda. Uku ndirikurumwa, kutswinywa nekunakirwa zvese. Ndakazomuchovha kusvika atunda kanenge katatu muropa imomo. Akatozoita zvekukumbira kuti ndimusiye. Ndakanzwa tsitsi. Akaenda kumba kwavo ega handina kumuperekedza. Akazotexta msg achitenda nezvandakanga ndamuitira. Iye zvino akungouya ndichirova pakati dzimwe nguvandinobva ndasiirwa kana $100 zvonzi babe utenge airtime.
Next story Ndakazokwapaidza muvhet nayo kuno diaspora
Previous story She begged me ndimukwire ndamudeedza kudiscplinary hearing